Ural Region bekulokhu idume emangalisayo ehlathini emahlathini, inqwaba yezinto zemvelo ezicebile futhi imithombo yamanzi amtoti eziyigugu, lithole emhlabeni wonke ukwazisa balneologic umkhuba. Ezokungcebeleka Ural njalo bakhangwa abahambi asebenzayo futhi abathandi isiko Russian. I-industry yetourism esifundeni imele ezingeni eliphezulu.
Phakathi ovusa ukuthula ezintabeni Ural and kaphayini kuyanda Wellness izikhungo, amahhotela kanye dispensaries isebenze round. Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo zabantu, omunye best holiday izindawo eRussia esibhedlela "Krasnousolsk", ukuvalelwa egumbini elihle Urals - Republic of Bashkortostan. The yokungcebeleka itholakala ogwini-non-umnkantsha emfuleni Usolka eduze usawoti iziphethu, ephulukisa odakeni.
On endaweni yayo wadala isikhungo sezokwelapha esinamandla, lapho ungakwazi avume ukwelashwa ngesilinganiso exchange of odokotela abaqeqeshiwe. Izivakashi ziphathwa esebenzisa izidakamizwa yizici zemvelo, inqophe ukunina nokuvuselelwa enempilo futhi ngokushesha. The yokungcebeleka impilo ifakwe imishini yesimanje kungakanani abakwaziyo kanye nokuhlola imishini zokukhiqiza isiJalimane, esiza odokotela ukuba afeze eliphezulu futhi ayinamaphutsa luhlolo.
Ngaphakathi epaki nenhle Yakhiwa Cottages eziyisikhombisa ukhululekile, ngamunye ephethe phambi ayo and design ingaphakathi. izakhiwo zokuhlala sizungezwe uthango kanye iwashi bangaphansi video ukubhekwa. Cosy, induduzo European nokuphepha - kuyinto "Krasnousolsk".
Sibhedlela (amanani kuyalungiswa kuncike ukufika namasevisi eziyinkimbinkimbi) inikeza amakamelo esiyisisekelo, anemisila Imishini emisha futhi ifenisha. Ezinye amakamelo balcony ethokomele esibheke kwepaki. Ukuze kube lula izivakashi egumbini ngalinye banikezwe yokugezela siqu, e ukutholakala TV satellite, umsakazo kanye yolayini yocingo nge Ukudayela ngqo.
Kuhlala ekhatsi ekamelweni elilodwa (ngosuku) izobiza ruble mayelana 2,500. Ukuze izivakashi nelungelo futhi kuyakhandla inikeza amafulethi nezinezingadi amakamelo amathathu ahlukene futhi iziko. Esikhathini isigaba "okunethezeka" Igumbi zamanani iphezulu kakhulu - ruble 7000. Uma nethuba ukukhokhela nemnandi enjalo, khona-ke musa ukuphika ngokwakho lokhu. resort Semali kuthatha abantu 500.
Sibhedlela "Krasnousolsk" has a yokudlela endaweni nezinezingadi amahholo amabili. Ukukhonza kwenziwa ngokuvumelana "lezitsha". Imenyu uyalinganisela futhi yakhelwe izazi abanolwazi. Ukudla zihlale ezihlukahlukene fresh, akhethiwe ikhumbula izici ngamunye iziguli.
Unyaka wonke etafuleni imifino kanye namakhambi kusuka engadini yabo. The yokungcebeleka impilo siphela yokubhaka lalo. Ububanzi confectionery nesitolo imikhiqizo bacebe ngokwanele. Izivakashi nazo Ungazama ezihlukahlukene izinhlobonhlobo uju kwezidleke zezinyosi, yona eyaqala ukwenza i ukuthuthukisa elikhiqizayo 2006
Ngaphezu sonkana ukuze yokudlela eyinkimbinkimbi sika "Tabyn" ekamelweni idili. Ukuze izivakashi bethu abathandekayo labapheki ukulungiselela izibiliboco enkulu cuisine Caucasian futhi Russian. Uhlela imikhosi neyokuqhuba izenzakalo zamabhizinisi. It inikeza izivakashi cafe ethokomele "Kugush" elinomlando omude obuhlungu iwayini ukuqoqwa kanye Ungadla yasekuqaleni.
Chitha isikhathi nabantu abahle futhi ujabulele indawo lendawo kungaba ibha ehlobo phezu lomfula. Ungadliwa abantu abangu phezu hlupha, izoso, yemvelo izithelo iziphuzo kanye Cocktails okumnandi.
Sibhedlela "Krasnousolsk" (Bashkiria) othambekele eziqhenyayo izipho okuphulukisa nemvelo. Ngenxa esiyingqayizivele usawoti iziphethu nasodakeni eyenziwa balneotherapy, inhalations, zokugeza kanye neensetjenziswa ukusiza ubuyisele impilo nangamandla ukuphakamisa. Iphrofayela eyinhloko kulesi sibhedlela - isifo umzimba, nezifo zesisu, futhi uhlelo zemisipha.
Iphinde ukwelapha izifo gynecological, urological kanye nesimiso sezinzwa. Ukunikeza usizo lochwepheshe bezokwelapha ukuba iziguli ezihlukahlukene izifo genitourinary, dermatological izinkinga zokuphefumula. Njalo izivakashi iya profiled kokubonisana (dokotela, wemithi yangaphakathi, gastroenterologist, physiotherapist, udokotela wezifo zabesifazane, uchwepheshe wezokudla, njll) Egumbini ukuhlolwa nezandla phezu ukuhlolwa ezidingekayo. Uma umphumela udokotela ekunika umuthi wokwelapha efanelekayo.
A resort wezempilo "Krasnousolsk" ngenkuthalo osebenza udaka ngamathe, ngaphezu kagesi. Ukwelashwa Kwenziwa ngesimo-hydrogen sulfide ne-sodium chloride okugeza. On izinkomba ngabanye babelwa udaka obhavu kanye ezisonga. Kabanzi balneotherapy, okwandisa umzimba ozivikela futhi kunciphisa umthelela ongemuhle izici zangaphandle (okugeza, tampons, izinhlelo zenkasa, ukuphuza).
Enye indlela ephumelelayo hydrotherapy nge uLwandle Lukasawoti, amafutha abalulekile, isitshalo ezikhishwe. Ukuze kwandiswe liphimbo, umoya, ezempilo umzimba ebekiwe izihlambi zokwelapha. On uchwepheshe ukusebenza ngabanye siyofeza esisuka yomgogodla, ukuqapha ukuhlanzwa emathunjini bese Physiotherapy.
Ukuze intsha nobuhle
Sibhedlela "Krasnousolsk" izithombe okuyinto ngokucace sifanekise amasevisi anikezwa, ifakwe spa yesimanje. owesifazane ngamunye uzokwazi uphumule ngokugcwele okugeza eyiqiniso Turkish, gumbi infrared kanye Jacuzzi ashisayo kanye solarium kanye massage amasevisi. Maphakathi kukhona amasevisi ubuhle nge ezihlukahlukene zokwelapha ebusweni nasemzimbeni.
Buyisela ubusha kanye nempilo kuzokusiza abanolwazi izingcweti isikhungo hardware Cosmetology "esthete". Amasevisi esinqophe cwaningo kanye nokwelashwa kwe-epidermis. Labetibambile anti-ukuguga imijovo, mesotherapy, nentaba plastic, cleaner zokuhlanza, waxing, wokucwebezelisa izibazi kanye nezinye izinqubo eziningi. Zonke Ochwepheshe ingaphakathi - beauticians oqeqeshiwe, onolwazi olunzulu kwi-industry yezobuhle.
Izihambi futhi engaqondakali ... Bashkiria
Sibhedlela "Krasnousolsk" (izintengo yokuhlala kanye nokwelashwa kuyadingeka ukuze ucacise umphathi) - yindawo lapho isikhathi kubambezela. Kuwo wonke isizini kuningi ukukwenza futhi ubone. Ebusika - skiing, ugibele isihlibhi, ukushushuluza kuqhwa, i-snowboarding, ukudlala i-hockey.
Summer - zibhukuda emfuleni, swimming pool, amanzi ezemidlalo, okujikeleza nokuhamba izinkambo. Insimu ongakasetshenzwa ezemidlalo amasimu izindlela lapho ungakwazi ukukhwela ezinamasondo, bahlanganyele imidlalo elakhiwa abantu abaningi, ukusebenzisa bagxume. Ngaphezu kwalokho, anawo resort ukuqina isikhungo, ibha karaoke, ukuyodlala i-bowling, table tennis, dance club kanye wezincwadi omkhulu. Noma ungavakashela encane isonto, yobuciko kanye Museum. Kukhethwa ukuzijabulisa wehlukile ukuze "dazzled".
Enikeza resort "Krasnousolsk" izingane?
Ezinganeni bobudala obungefani ukusebenza ekuthuthukisweni isikhungo. Ngaphansi kuhlolwa i umfundisi ongumakad 'ebona we izingane uzobe wahlanganyela imidlalo sithakazelise futhi, ubuke opopayi, nokuxhumana. Izingane bayokwazisa lokudlala ongaphandle nge senhliziyo, amaslayidi, kanye nesigaxa ovundlile. Kwahlelwa nsuku zonke izithombe imibukiso, ezemidlalo kanye nemisebenzi yokudala.
Inhlabamkhosi kusuka izivakashi
izivakashi Ngenelisekile njalo ushiye okubuyayo. Sibhedlela "Krasnousolsk", ngokuvumelana abantu abaningi abafunda nenhlanhla yokuthola uvakashele lapha - leli ipharadesi phakathi nedolobha, endaweni ephilayo, ephethwe alondoloze ukuhlanzeka acwebile nokuthula. It libhekene izihambi, ekwamukeleni umkhathi inkonzo ezehlukile ezingeni European. Kube nakanjani adala amandla futhi uthole umfutho wamandla kanye vivacity isikhathi eside.